Perforated eardrum နားစည်ပေါက်ခြင်း – Mawlamyine Daily
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဆောင်းပါး	 March 11, 20190Minutes
နားကိုက်နေပါသည်။ ပထမခံစားရတဲ့ နေ့က နားထဲက ယားလို့ နားကြပ်တံနှင့် ကြပ်ကြည့်ရာ နားထဲတွင် သွေးများ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် General Hospital သို့ သွားပြရာ နားအကြား အာရုံစစ်ဆေးခြင်း၊ နားစည်အတွင်းသို့ ကင်မရာနှင့် ကြည့်စစ်ဆေးပေးရာ နားစည် နှစ်ဖက်လုံး ပေါက်နေကြောင်း ပြပါသည်။ ယခု CILOXAN5ml Alcon ဆေးရည် ၄ ဗူး ပေးလိုက်ပါသည်။ တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ တခါထည့် ၃ စက်၊ ၂ ပတ် ထည့်ရမည်လို့ ပြောပါသည်။ နောက် ၃ လ ကြာပြီး ပြန်လာပြရမည်လို့ မှာလိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နားစည်ပေါက်လျှင် ကုလို့ရပါသလား၊ ဘယ်အရွယ်တွင် အကြားအာရုံကို ထိခိုက်လာနိုင်မလဲ။ ယခုတော့ ကြားနေရပါသည်။ အသက်ကြီးလာရင် အခက်တွေ့နိုင်ပါသလား။ လိုအပ်ရင် ကြည့်ရှူစစ်နေဆေးနိုင်ရန် ဆေးရုံမှ ရိုက်ပေးလိုက်သော နားစည် အတွင်းပိုင်း ဓါတ်ပုံပါ ပူးတွဲပို့လိုက်ပါသည်။ ကုလို့ ရပါ့မလား။ Age 33, Male
နားကို ခန္ဓာဗေဒအရ အပိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲထားတယ်။ Eardrum (Tympanic membrane) နားစည် နောက်မှာ လေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ Middle ear နားအလည်ပိုင်း ရှိတယ်။ နှာခေါင်းနဲ့ နားအလည်ပိုင်းက Eustachian tube ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်း (ပြွန်) နဲ့ ဆက်နေတယ်။ နားထဲကလေဟာ အဲဒီလမ်း ကနေ ပြန်ထွက်တယ်။
1. Hearing အသံလှိုင်းက လာရိုက်ခတ်ရင် အာရုံကြောကတဆင့် အသံကြားရတယ်။
2. Protection အလည်နားပိုင်းကို အပြင်လောကကနေ အကာကွယ် ပေးထားတယ်။
နားစည် ဘာလို့ ပေါက်ရသလဲ –
• Middle ear infection (Otitis media) နားအလည်ပိုင်းပိုးဝင်တာကနေ ထွက်တဲ့အရည်ရဲ့ဖိအားကြောင့် နားစည်ပေါက်ရတယ်။
• Barotrauma နားစည်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းနဲ့ အပြင်ဘက်မှာ Air pressure လေဖိအား သိပ်ခြားနာတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တယ်။ Airplane ear လို့ ခေါ်ကြတယ်။ Scuba diving လုပ်ရင်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
• Acoustic trauma သေနတ်သံလို၊ Explosion ပေါက်ကွဲသံ၊ Loud noise ကျယ်လွန်းတဲ့အသံကြောင့် ဖြစ်တယ်။
• Foreign objects နားထဲကို အပြင်ပစ္စည်း တခုခုဝင်ရာကနေ ဖြစ်တယ်။
• Severe head trauma ခေါင်းကို အပြင်းအထံခိုက်မိရာကနေ ဖြစ်တယ်။
နားစည် ပေါက်နေရင် –
• Consistent ear pain that stops suddenly နားက နာနေမယ်။ နောက် ရုတ်တရက် နာတာပျောက်သွားတယ်။
• Clear, pus-filled or bloody drainage from your ear နားကနေ အရည်-ပြည်-သွေးထွက်မယ်။
• Hearing loss နားအကြား ထိခိုက်မယ်။
• Ringing (Tinnitus) နားထဲ ဆူညံသံတွေ ကြားနေရမယ်။
• Spinning sensation (Vertigo) ခေါင်း ပတ်ခြာလည်မူးမယ်။
• Nausea or vomiting မူးရာကနေ ပျို့-အန်ချင်မယ်။
Complications ဆက်တွဲခံစားရမှာတွေကတော့ –
1. Hearing loss နားမကြားတာ၊
2. Middle ear infection (Otitis media) နားအလည်ပိုင်း ရောင်ရမ်းတာ၊
3. Middle ear cyst (Cholesteatoma) နားအလည်ပိုင်းအိတ် ဖြစ်လာတာ၊
တချို့မှာ ခွဲစရာမလိုဘဲ အပေါက်က ပိတ်ပြီး ပျောက်သွားမယ်။ ပျောက်ဘို့ ရက်သတ္တပါတ် နဲနဲကနေ လနဲနဲအထိ ကြာနိုင်တယ်။ Ear drops နားထည့်ဆေးတိုင်း နားစည်ပေါက်သူနဲ့ မတည့်ပါ။ နားအထူးကု-ဆရာဝန် ညွှန်တာ သုံးပါ။ CILOXAN Eye Drop မှာ Ciprofloxacin hydrochloride ပါတယ်။ ပိုးတွေကို နိုင်တဲ့ဆေးဖြစ်တယ်။ နာတာရှည် ပိုးဝင်နေရင် ရေချိုး-ရေကူးတိုင်း နားကို Ear plug ဆို့စရာ တပ်ရတတ်မယ်။